Public Health Concern जनप्रतिनिधि महिलालाई छैन प्रसुती बिदा ! बाल बच्चा संगै जनताको सेवा ! – Public Health Concern
जनप्रतिनिधि महिलालाई छैन प्रसुती बिदा ! बाल बच्चा संगै जनताको सेवा !
पर्साको पोखरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सल्मा खातुन जनप्रतिनिधि बन्नुअघि पत्रकारिता गर्थिन् । त्यसवेला उनले धेरैको अधिकार र सामाजिक मुद्दाबारे कलम चलाइन्/बोलिन् । अहिले आफू सुत्केरी हुँदा आराम गर्न पाइनन् । १९ वैशाख २०७६ मा सुत्केरी भएकी खातुन अस्पतालबाट भोलिपल्टै घर गइन् । उनको घर र कार्यालय दुई मिनेटको दूरीमा छ ।
“नागरिक समस्या लिएर घरमै आउन थालेपछि भेट्नै पर्‍यो । सुत्केरी भएको १५ दिनदेखि नै कार्यालय, ‘फिल्ड’ जान थालें” खातुन भन्छिन्, “उपप्रमुखले न्यायिक समितिमा आएको जग्गा/साँध सिमाना विवाददेखि योजना र संघसंस्थाका क्रियाकलाप अनुगमन लगायतका काम कार्यालयमा बसेर गर्नै मिल्दैन ।”
देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारका विभिन्न तहमा निर्वाचित कुल ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३५३ महिला छन् । उपाध्यक्ष लामिछानेकै भनाइमा “राजनीति गर्ने महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यबारे ख्यालै नगरी कानून बनाइँदा जनप्रतिनिधि महिला र बच्चा दुवैको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ ।”
गाउँपालिकाका अध्यक्ष पे्रमबहादुर तिमल्सिना भन्छन्, “उपाध्यक्षको अधिकार हामीले लिन मिल्दैन, त्यस्तो अवस्थामा टेलिफोनबाट सल्लाह गरेर काम गर्ने गरेका छौं । गाह्रो उहाँलाई मात्र होइन गाउँपालिकालाई पनि हुँदोरहेछ ।”
सुत्केरी भएका महिलाले हिंडडुल गर्न सजिलो भयो भन्दैमा स्वास्थ्य ठीक भएको ठान्न नहुने राय स्त्रीरोग विशेषज्ञको छ । स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. रंगिना शाह भन्छिन्, “प्रसूतिका कारण पाठेघर र विभिन्न हर्मोनमा भएको परिवर्तन पुरानै अवस्थामा फर्किन कम्तीमा ४५ दिन आराम गर्नैपर्छ ।”
मनोचिकित्सक डा. कपिलदेव उपाध्याय कामकाजी महिलाहरू घरभित्र र बाहिर दुवैतिरको जिम्मेवारीले गर्दा मानसिक तनाव बढेको बताउँछन् ।
“बच्चा सानोहुन्जेल महिलाले बाहिरको कामभन्दा बच्चाकै लागि बढी समय दिनु उपयुक्त हुन्छ । घरमा महिलाले गर्ने भनेर छाड्ने गरिएको काम परिवारका अरू सदस्यले जिम्मेवारी सम्झेर गरिदिए मानसिक तनाव कम गर्न सहयोग पुग्छ”, उपाध्यायको सुझव छ ।
स्थानीय तहमा उपप्रमुखको जिम्मेवारी के के हुन् भन्ने नबुझनु र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा मात्र उपाध्यक्षको भूमिका रहन्छ भन्ने परम्परागत सोच मस्यौदाकारमा हावी भएकैले सम्बद्ध कानूनमा विविध कमजोरी देखिएका छन् ।
प्रसूति भएका वेलामा मात्र होइन जनप्रतिनिधि बिरामी हुन सक्छन्, मृत्यु संस्कार लगायतको अवस्था आउन सक्छ भन्ने सुझबुझ कानून बनाउँदा पुर्‍याइएको छैन । सार्वजनिक काममा बाधा नपुर्‍याउन विशेष परिस्थितिमा कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध कानूनले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
कतिपय जनप्रतिनिधि भन्छन्— जनप्रतिनिधिले स्वयंसेवी भावले काम गर्ने हो त्यसकारण हाम्रो कार्यालय समय नै छैन ।
राजनीतिक पदाधिकारीको ‘ड्यूटी’ कर्मचारी जस्तै हुन्छ भन्ने त भएन तर कुनै जनप्रतिनिधि नगएमा के हुन्छ ? कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, “जनप्रतिनिधिको काम गर्ने समय निश्चित हुनैपर्छ । कार्यकारी अधिकार भएका उनीहरू कुन समयमा कार्यालयमा भेटिन्छन् ? कार्यालयमा काम गर्ने समय कति हो भन्ने बारेमा पनि आचारसंहिता बनाउनुपर्छ ।”
पौडेलका अनुसार सम्बन्धित पालिकाहरूले छुटेका विषय समेटेर आफैं कार्यविधि बनाउन सक्ने बताउँछन् । “सम्बन्धित पालिकाहरूले कार्यसम्पादन नियमावली बनाएर राख्न पनि सक्छन्”, उनी भन्छन् ।
“विकल्प केही नहुँदा संघीय सरकारले बनाएको यो कानून आकर्षित हुन्छ । अहिले देखिएको समस्यालाई यही विकल्पले सम्बोधन गर्न सक्छ”, श्रेष्ठ भन्छन् ।
तर, अधिकांश जनप्रतिनिधिले कार्यालय भवन सानो र कति भवन त बन्ने क्रममा रहेकाले ठाउँकै अभाव भइरहेको गुनासो पनि गरेका छन् । धादिङ, गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ढुङ्गाना भन्छिन्, “कार्यालयमै बच्चा ल्याएर काम गर्ने वातावरण भए हुन्थ्यो । हाम्रो कामले बच्चाको अधिकार खोसिनुहुँदैन भन्ने त लाग्छ नि !” ढुङ्गाना सुत्केरीमा पर्याप्त आराम नगरेको र पौष्टिक आहारहरू नखाएकै कारण दूध नआएको बताउँछिन् ।
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. रंगिना शाहको सुझव छ, “बच्चाको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आमाको दूधबाट आउने हो । त्यसैले अरू कुरा खाएर बच्चा अघाएकै छ भनेर बेवास्ता गर्नुहुँदैन ।”
कार्यकारी अधिकार भएका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले कसैलाई कार्यवाहक तोक्न सक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै राखिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
जस्तो न्यायिक समितिको मात्र कुरा गर्ने हो भने दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या, घरेलु हिंसा जस्ता गुनासा धेरै आउँछन् । त्यसमा छलफल गरेर निर्णय गर्न संयोजक चाहिन्छ, चाहिने नै भयो ।
उपप्रमुख नहुँदा कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै कानून बनाएर तोक्न सक्छ । अर्को कुरा, झण्डै ४१ प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिला छन्, यद्यपि कति प्रजनन् उमेरका छन्– त्यो अर्को कुरा भयो । जति जना भए पनि प्रजनन् अधिकार संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था हो ।
एउटा महिलाले कहिले बिहे गर्ने, गर्भवती हुने र कहिले बच्चा जन्माउने त्यो उसको संवैधानिक हक हो । शिशुको पनि स्तनपान गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।
प्रसूति बिदा चाहिं संघीय कानूनले सबैलाई लागू हुने गरी बनाउनुपर्छ । यो निजामती कर्मचारी, शिक्षक, अरु श्रमिक र जनप्रतिनिधिलाई कति भन्ने कुरा नै होइन । अहिले विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूलाई प्रसूति अवस्थाका कारण अप्ठ्यारो परिरहेको मैले पनि देखिरहेको छु । त्यसैले यो अप्ठ्यारोलाई चाँडै सल्टाउने गरी संघीय सरकारले कानूनमा थप वा संशोधन गर्नु जरुरी छ ।श्रोत : हिमाल खबर